Xildhibaanka Degmaada Nyando oo caawa sexanaya xabsi – The Voice of Northeastern Kenya
Xildhibaanka Degmaada Nyando oo caawa sexanaya xabsi
Xildhibaanka degmada Nyando Fred Outa ayaa lagu wadaa in caawa uu baryo xabsiga kadib markii lagu soo eedeeyay in u kicinaayay ardayda dhigata schoolka ay aqristaan gabdhaha ee Ahero Girls’ Secondary School si ay dibadbax u dhigaan.
Xildhibaanka oo maanta oo talaada ahayd la soo xiray ayaa la sheegay in mudaaharadka uu ku boorinaayay ardeyda in ay qaadan lagu doonayay in dib loogu soo celiyo maamulihii hore ee dugsigaasi , Sarah Adipo
Kuxigeenka ciidamada booliska dalka Joseph Keitany ayaa sheegay in ciidamada ka howlgala saldhiga booliska ee Ahero ay soo qabteen mudanahaasi isagoo ardyada u jeedinayo khudbad uu ugu baaqayay in ay mudaaharadkaasi qaadan.
Outa ayaa markii dambe la horgeeyay xaakinka maxkamada Kisumu Julius Ng’arng’ar si uu uga jawaabo eedeymaha ku sabsan in uu kicinaayay ardayda si ay dibadbax u qaadan.
Maxkamada ayaa loo sheegay in xildhibaanka uu ugu baaqayay in xiliga ardayda qaadan mudaaharadka ay isticmaalan dhagxaan iyo waxyaabo kale taaso bililiqa iyo dhibaato loo geysan lahaa dadka deeganka.
Xildhibaankan oo lagu soo eedeyay ku dhawaad sedex dacwadood oo kala ah ayaa iska fogeeyay dhamaan eedeymaha loo jeediyay isagoo sheegay in talaabooyinkaasi lagu doonayo oo kale sidii sumcadiisa lagu xumeyn lahaa.
Waxaa maalinta berito ah la ogaan doonaa in mudanahan lagu sii dayn karo damiin lacageed iyo in kale.
Dugsiga ayaa hadda lagu soo waramayaa in si kumeel gaar ah loo xiray si aysan ardayda u qaaden wax dibadbax ah oo marka dambe khasaaro dhalin karo.
← Duliyayaasha diyaaradaha qaranka oo ku goodiyay shaqo joojin qaran
Hal qof oo lagu dilay isku dhacyo horleh oo kasoo cusboonaday Naivasha →